फागुन २० देखि सिटिजन्स बैंकले साढे दुई अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, व्याजदर कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > फागुन २० देखि सिटिजन्स बैंकले साढे दुई अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, व्याजदर कति ?
फागुन २० देखि सिटिजन्स बैंकले साढे दुई अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, व्याजदर कति ?
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले फागुन २० गतेदेखि रू. २ अर्ब ५० करोड बराबरको निष्कासन गर्ने भएको छ ।
बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्ये रू. १ अर्ब बराबरको १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि विक्री गर्नेछ ।
सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने कुल ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ । र बाँकी रू. १ अर्ब ५० करोड बराबरको १५ लाख कित्ता ऋणपत्र भने व्यक्तिगत तवरबाट विक्री खुला गर्ने भएको हो ।
२०८६ मा परिपक्व हुने यो ऋणपत्र खरीदका लागि न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतमा ९ लाख ७० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । प्रति ऋणपत्रमूल्य रू. १००० तोकिएको छ ।
विक्री प्रबन्धक नेपाल ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । आवेदकले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका शाखा कार्यालयहरु तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका सि ( आस्बा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ऋणपत्रलाई इक्रा नेपालले मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने ‘इक्राएनपी एल ट्रिपलबि प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । बैंकले धितोपत्र बोर्डसँग माघ २१ गते स्वीकृति पाएसँगै ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकको ऋणपत्रमा छिटोमा फागुन २३ गते तथा ढिलोमा चैत ४ गतेसम्म आबेदन दिन सकिनेछ ।
२०७६ फागुुण १३ गते ०९:२१ मा प्रकाशित
शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समायोजन, कति तोक्यो मूल्य ?
शेयर बजार जानकारकहरु भन्छन् -'अझै बढेर रेकर्ड राख्छ' ‘अर्थमन्त्री बाहिरिने हल्लाले बढेको होइन !’
कर नतिर्ने कम्पनीलाई महानरगापालिकाले दियो फोहोर उपहार
Bird flu in Pokhara: Trade of eggs, meats suspended
१० महिनामै सेयर कारोबार १ खर्ब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ
नेप्से परिसूचक ५२.१८ अंकले बढ्यो
कृषिमन्त्री खनाल आइसियुमा